नासाको फर्मि टेलिस्कोप विफलताको कारण काम गर्न रोकिन्छ | ग्याजेट समाचार
विसंगतिको कारण नासाले फर्मी स्पेस टेलिस्कोप बन्द गर्दछ
यो एक हप्ता पहिले भएको थियो, तर यो हिजो थियो जब नासाले पत्ता लगाए कि तिनीहरू फर्मी टेलिस्कोप बन्द गर्न बाध्य छन्। पछिल्लो मार्च १ 16 यो भएको थियो। यो २०० 2008 मा अन्तरिक्षमा शुरू गरिएको वेधशाला हो, जसको उद्देश्य ब्रह्माण्डमा गामा किरणहरूको स्रोत अध्ययन गर्नु हो। तर, सौर्य प्यानल मध्ये एकको डिस्कमा समस्याको कारणले, फर्मी बन्द गर्न बाध्य गरिएको छ.
यस्तो देखिन्छ कि सौर्य प्यानल मध्ये एकको डिस्कमा यो समस्या भएको हो प्रोब स्वत: सुरक्षित मोडमा प्रवेश गर्दछ। यसले फर्मीले यसको उपकरणहरू बन्द गर्न र डाटा उत्पन्न गर्न नसक्ने बनाएको छ। नासा आफैले प्रकट गरे अनुसार
नासा आफैंले यस घटनाको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। सौर प्यानल चलेको छैन जब आवश्यक छ। त्यसोभए तिनीहरू पनी निश्चित छैन कि टेलिस्कोपमा यो विसंगतीको उत्पत्ति हो भनेर। त्यस समयमा हामी कुनै पनि सम्भावित परिकल्पना बन्द गर्न चाहँदैनौं।
यसबाहेक, मिसनमा काम गर्ने टोलीले सोलर प्यानल स्थिर राख्ने सम्भावनालाई विचार गर्दछ फर्मिमा यस समस्याको उत्पत्ति के हो भनेर विश्लेषण गर्ने क्रममा। टेलिस्कोपको दशौं वार्षिकोत्सव मनाईएको केही महिना पछि भएको एक दुर्घटना। A वार्षिकोत्सव जुन ११ लाई मनाउने.
नासामा यस परियोजनाका प्रमुख वैज्ञानिक जुली म्याकनेरीको धारणा छ कि टेलिस्कोपले छिट्टै नै काम थाल्नेछ। सायद अर्को हप्ता पनि पहिले नै एक वास्तविकता हो। यद्यपि यसले अनुसन्धानलाई आफ्नो पाठ्यक्रम लिनबाट रोक्न सक्दैन। किनकि तिनीहरू ठ्याक्कै यस विफलताको मूल जान्न चाहन्छन् जुन डाटाको निर्माणबाट टेलिस्कोपलाई रोक्छ।
यो नासा र जर्मनी, फ्रान्स, इटली, जापान र स्विडेनको अन्तरिक्ष एजेन्सीहरूको ठूलो लगानीमा परियोजना हो।। त्यसोभए यो असफलताको मर्मत हुन नसक्ने अवस्थामा नासालाई ठूलो सहयोग पुर्‍याउने परियोजनाको अन्त्य हुनेछ। यद्यपि उनीहरू आशा गर्दछन् कि फेर्मी चाँडै फेरि सामान्य रूपमा काम गर्दछ। हामी सतर्क रहनेछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » विसंगतिको कारण नासाले फर्मी स्पेस टेलिस्कोप बन्द गर्दछ
ईन्स्ट्रामले फेरि हाम्रो फिडलाई कालक्रम क्रममा देखाउँदछ